कपिलवस्तुको शिवगढीमा स्व. विरजंगको पाथृव शरीरमा माल्यार्पण – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर कपिलवस्तुको शिवगढीमा स्व. विरजंगको पाथृव शरीरमा माल्यार्पण
कपिलवस्तु : नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता चन्द्र विक्रम चन्द विरजंगको पाथृव शरीरमा माल्यार्पण गरिएको छ । लामो समयदेखि उच्च रक्तचाप, मधुमेह र फोक्सोको समस्या रहेका विरजंगको भारतको दिल्ली स्थित म्याक्सीस अस्पतालमा शुक्रवार बिहान निधन भएको हो ।
जनयुद्ध कालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीको पर्वत र बागलुङको इन्चार्जको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका विरजंग पछिल्लो समय विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य थिए ।
केही महिना अघि अदालतको आदेशमा चितवन कारागारबाट रिहा भएका विरजंग कारागारमा रहदा समेत पटक–पटक अस्वस्थ भएपछि अस्पताल भर्ना भएका थिए । कपिलवस्तुको शिवगढीका स्थायी बासिन्दा ६१ वर्षीय विरजंगका दुई छोरा र एक श्रीमती छन् । उनको आजै अन्त्यष्टि गरिने पारिवारीक स्रोतले जनाएको छ ।